RASMI: Maamulka Premier League Oo Ku Dhawaaqay Isbadalo Lagu Sameeyay Jadwalkii Kulamada April Ee Horyaalka Ingiriiska, Sababta Loo Badalay Iyo Jadwalka Cusub. – GOOL24.NET
March 22, 2018 Mahamoud Batalaale
Maamulka horyaalka Premier League ayaa isbadalo ku sameeyay jadwalkii kulamada horyaalka Ingiriiska ee bisha April sababo la xidhiidha kulamada afar dhamaaadka FA Cupka iyo kulamada siddeed dhamaadka UEFA Champions League oo dhamaantood bisha April la ciyaari doono waxana jira isbadalo badan oo lagu sameeyay jadwalkii hore.
Todoba kulan oo ka mid ah horyaalka Premier League ayaa la badalay waqtigii markii hore loo qorsheeyay in la ciyaaro halka saddexda kulan ee kala ay u socon doonaan qaabkii markii hore loo qorsheeyay. Kulamada la badalay waxaa ka mid ah kuwo ay ciyaari doonaan kooxaha Tottenham, Man United, Arsenal iyo Liverpool.
Kulamada aan la badalin waxaa ka mid ah kulanka Manchester City ay soo dhawayn doonto kooxda Swansea City, si la mid ah kulanka Anfield ay Liverpool kula ciyaari doonto kooxda Stoke City iyo waliba kulanka West Ham ay qaabili doonto Man City.
Laakiin kulanka ay Manchester United booqan doonto kooxda Bournemouth ayaa ka mid ah kulaada la badalay waxana la ciyaari doonaa Arbacada April 18 halka kulankii Arsenal iyo West Ham laga dhigay khamiista April 19 waxaana axada April 22 laga dhiga kulanka ay Liverpool booqan doonto kooxda West Brom.
Kulanka ay Chelsea booqan doonto kooxda Burnley ayaa isna loo badalay khamiista 19 April waxana isla taariikhdan la ciyaari doonaa kulanka Leicester City iyo Southampton ee horyaalka Premier League.
Kooxaha Chelsea, Manchester United, Tottenham iyo Southampton ayaa isbadaladan loogu sameeyay in ay qayb ka yihiin FA Cupka halka kooxaha Liverpool, Manchester City iyo Arsenal loogu sameeyay in ay qayb ka yihiin tartamada Yurub ee UEA Champoins league iyo Europa League.
Haddaba halkan kaga bogo dhamaan kulamada isbadalka lagu sameeyay iyo kuwa aanu isbadalkani saamaynta ku yeelan oo dhamaystiran:
Dagaalka ugu wayn ee bisha April ayaa ah in kooxaha Manchester United, Liverpool, Tottenham iyo Chelsea ay si wayn ugu dagaalami doonaan kaalmaha sare ee min kaalinta labaad ilaa kaalinta afraad halka Arsenal ay hadda u muuqato in ay awooda saari doonto ku guulaysiga Europa League si ay UEFA Champions League ugu soo bixi karto.